Egipto en conjunto con la embajada de India en El Cairo celebró el Día Internacional del Yoga con un evento especial en el famoso Palacio del Barón
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ယနေ့ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ က ၄ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယောဂနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လူပေါင်း ၂ဝဝ ကျော် စုပေါင်းကာ ယောဂလေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးတို့ ပူးပေါင်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဂနေ့ (1st International Day Of Yoga) အခမ်းအနားကို (၂၀၁၅) ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏအမျိုးသား အားကစားပြိုင်ပွဲရုံ(၁)၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။(Xinhua)
ချုံချင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံမှ Chang’e-4 အာကာသယာဉ် ဖြင့် လကမ္ဘာပေါ်သို့ သယ်ဆောင်သွားသော ဝါဂွမ်းစေ့ သည် ပထမဆုံးအဖြစ် လကမ္ဘာပေါ်တွင် အပင်ပေါက်လာကြောင်း အသေးစား ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်တုစမ်းသပ်မှု အဖွဲ့တစ်ခုမှ သိပံ္ပပညာရှင်များက ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမှ မမြင်တွေ့နိုင်သည့် လကမ္ဘာ၏ အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်အာကာသယာဉ် Chang’e-4 သည် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖြစ် ပထမဆုံး ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်တုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Chang’e-4 အာကာသယာဉ်သည် အသေးစား ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်တုတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ဝါဂွမ်းစေ့များ၊ စပျစ်စေ့များ၊ အာလူးများ အပါအဝင် ယင်ကောင်ဥများ နှင့် မှိုတစ်ချို့ကို သယ်ဆောင်သွားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ချုံချင်းတက္ကသိုလ်မှ သိပံ္ပပညာရှင်များ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တစ်ခု ကပြောကြားခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်မှ ပေးပို့ခဲ့သည့် ဓါတ်ပုံများတွင် အခြားအစေ့များမှ အပင်ပေါက်လာခြင်းမရှိသော်လည်း ဝါဂွမ်းစေ့မှ ထွက်လာသော အညှောင့်လေးသည် ကောင်းစွာ ကြီးထွားလာကြောင်း တွေ့ရသည်။ (Xinhua)
Varios cientos de peruanos recordaron este sábado el Día Internacional del Yoga, la extendida disciplina hinduista. En los Domos Art de la Costa Verde, en la capital Lima, se compartieron variadas asanas o posturas con que cultivaron el cuerpo, la mente y el espíritu.
Hi, everyone! Brainlink isaportable and wearable mental fitness headband that collects the brainwave data accurately, and combines with different Apps to provideacomprehensive brain training for7essentaial abilities of the brain, such as Instance Foucus, Impulsive Control, Stress Handling, Deep Meditation and so on. If you like to do meditation and yoga, Brainlink could solve the lack of quantifiable DATA in meditation process problem and the mind wander off problem in our2Application, “Zen Garden” and “8 Min Meditation” in APP store or Google Play, If you are Geeks, this product is so cool. Brainlink could control drone using your mind power and we also have AR application let you look at cups is flying and the spoon is bent. Our application “Mind Combat” and “Mind TD” also suit for you. If you are parents, Brainlink helps ADHD child training their focus ability and improve them memory, Our application “Mind Sport” and “Mind the Ant” also suit for child have fun in game. Buy Now: http://amzn.to/2j1bOkn- North America http://bit.ly/2j1aSwf- Europe If you have any questions, please contact maggie@macrotellct.com
Un hombre de 72 años de edad con gran dominio de yoga, abre curso gratuito para que más personas aprovechen los beneficios de esta disciplina.
El yoga de la risa es una nueva práctica de moda en la capital egipcia, adecuada para todas las edades, y entre sus beneficios se incluyen la disminución del estrés, depresión, tensión y ayudaaelevar el estado de ánimo.
some basic Qi Gong and tui shou movements teached by master Zhu Xinhua duringaprivate class. www.hua-long.ch
El yoga con animales se ha puesto de moda en los últimos años en Estados Unidos. Clases de yoga con cabras, gatos y caballos aparecen por todas partes. El Gato Coffee House, primera y única cafetería de gatos en Houston, organiza una clase mensual de yoga con los felinos.
В этом видео расскажу о покупке билетов в Тибет с клубом oum.ru, о подарках участникам тура, обсудим насущные вопросы тех, кто уже купил билеты, а также тех, кто еще в процессе принятия решения. Даты поездки в этом году: вылет из Москвы5сентября, возвращение из Лхасы 24 сентября (в Москве 25 сентября). Программа тура: https://www.oum.ru/tours/tibet-yoga-tour/ #oumrutravel #готовимсяккоре #тибетнезагорами Организатор тура: https://vk.com/club_oum Руководитель тура: https://vk.com/averba Информационные материалы по туру: https://vk.com/tibetyogatour Плейлист по эфирам прошлого года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfK7FzQTi8949PgOt49ZhtTrR38d46j3R
170124 Yixing Maoyan Movie Interview for Kung Fu Yoga Promotion 猫眼电影专访张艺兴
This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia -	https://wn.com/Wang_Xian
တရုတ်အာကာသယာဉ် Chang’e-4 ပေါ်ရှိ ဝါဂွမ်းစေ့ မှ အပင်ပေါက်လာ
Cientos de peruanos recuerdan Día Internacional del Yoga
Xinhua News Agency Reported Macrotellect high-Tech Drone
Cuerpo y mente de 72 años, sanos gracias al yoga
Yoga de la risa, la nueva moda en Egipto para vencer al estrés
Qi Gong basics - Zhu Xinhua
Yoga con gatos, cada vez más populares en Houston
Тибет и Кайлас 2019 с клубом oum.ru. Билеты и первые сборы.
[XingPark] [Eng Sub] 170124 Yixing Maoyan Movie Interview
ချုံချင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံမှ Chang’e-4 အာကာသယာဉ် ဖြင့် လကမ္ဘာပေါ်သို့ သယ်ဆောင်သွားသော ဝါဂွမ်းစေ့ သည် ပထမဆုံးအဖြစ် လကမ္ဘာပေါ်တွင် အပင်ပေါက်လာကြောင်း အသေးစား ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်တုစမ်းသပ်မှု အဖွဲ့တစ်ခုမှ သိပံ္ပပညာရှင်များက ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမှ မမြင်တွေ့နိုင်သည့် လကမ္ဘာ၏ အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်အာကာသယာဉ် Chang’e-4 သည် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖြစ် ပထမဆုံး ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်တုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Chang’e-4 အာကာသယာဉ်သည် အသေးစား ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်တုတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ဝါဂွမ်းစေ့များ၊ စပျစ်စေ့များ၊ အာလူးများ အပါအဝင် ယင်ကောင်ဥများ နှင့် မှိုတစ်ချို့ကို သယ်ဆောင်သွားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ချုံချင်းတက္ကသိုလ်မှ သိပံ္ပပညာရှင်များ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တစ်ခု ကပြောကြားခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်မှ ပေးပို့ခဲ့သည့် ဓါတ်ပုံများတွင် အခြား...
Hi, everyone! Brainlink isaportable and wearable mental fitness headband that collects the brainwave data accurately, and combines with different Apps to provideacomprehensive brain training for7essentaial abilities of the brain, such as Instance Foucus, Impulsive Control, Stress Handling, Deep Meditation and so on. If you like to do meditation and yoga, Brainlink could solve the lack of quantifiable DATA in meditation process problem and the mind wander off problem in our2Application, “Zen Garden” and “8 Min Meditation” in APP store or Google Play, If you are Geeks, this product is so cool. Brainlink could control drone using your mind power and we also have AR application let you look at cups is flying and the spoon is bent. Our application “Mind Combat” and “Mind TD” also sui...
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ယနေ့ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ က ၄ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယောဂနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လူပေါင်း ၂ဝဝ ကျော် စ...
ချုံချင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံမှ Chang’e-4 အာကာသယာဉ် ဖြင့် လကမ္ဘာပေါ်သို့ သယ်ဆောင်သွားသော ဝါဂွမ်းစေ့ သည် ပထမဆုံးအဖြစ် လကမ္ဘာပေါ်တွင် အပင်ပေါက်လြာေ...
Varios cientos de peruanos recordaron este sábado el Día Internacional del Yoga, la extendida disciplina hinduista. En los Domos Art de la Costa Verde, en la ca...
Hi, everyone! Brainlink isaportable and wearable mental fitness headband that collects the brainwave data accurately, and combines with different Apps to prov...
El yoga de la risa es una nueva práctica de moda en la capital egipcia, adecuada para todas las edades, y entre sus beneficios se incluyen la disminución del es...
El yoga con animales se ha puesto de moda en los últimos años en Estados Unidos. Clases de yoga con cabras, gatos y caballos aparecen por todas partes. El Gato ...
В этом видео расскажу о покупке билетов в Тибет с клубом oum.ru, о подарках участникам тура, обсудим насущные вопросы тех, кто уже купил билеты, а также тех, кт...
Egipto en conjunto con la embajada de India en El Cairo celebró el Día Internacional del Y...
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ယနေ့ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ က ၄ ကြိ...
ချုံချင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံမှ Chang’e-4 အာကာသယာဉ် ဖြင့် လကမ္ဘာပေါ်သို့ ...
Varios cientos de peruanos recordaron este sábado el Día Internacional del Yoga, la extend...
Hi, everyone! Brainlink isaportable and wearable mental fitness headband that collects t...
Un hombre de 72 años de edad con gran dominio de yoga, abre curso gratuito para que más pe...
El yoga de la risa es una nueva práctica de moda en la capital egipcia, adecuada para toda...
some basic Qi Gong and tui shou movements teached by master Zhu Xinhua duringaprivate cl...
El yoga con animales se ha puesto de moda en los últimos años en Estados Unidos. Clases de...
В этом видео расскажу о покупке билетов в Тибет с клубом oum.ru, о подарках участникам тур...
Celebran Día Mundial del Yoga...
တရုတ်အာကာသယာဉ် Chang’e-4 ပေါ်ရှိ ဝါဂွမ်းစေ့ မှ အပင်...
Cientos de peruanos recuerdan Día Internacional de...
Xinhua News Agency Reported Macrotellect high-Tech...
Cuerpo y mente de 72 años, sanos gracias al yoga...
Yoga de la risa, la nueva moda en Egipto para venc...
Qi Gong basics - Zhu Xinhua...
Yoga con gatos, cada vez más populares en Houston...
Тибет и Кайлас 2019 с клубом oum.ru. Билеты и перв...
[XingPark] [Eng Sub] 170124 Yixing Maoyan Movie In...
Wang Xian Quan Fa - Geng Xinhua 1989...